သင်တို့ သတိမထားမိကြတဲ့ ကား အတွင်းခန်းထဲမှ အဆိပ်ငွေ့ထွက်ရှိတတ်သည့်အကြောင်း - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > ဗဟုသုတများ > သင်တို့ သတိမထားမိကြတဲ့ ကား အတွင်းခန်းထဲမှ အဆိပ်ငွေ့ထွက်ရှိတတ်သည့်အကြောင်း
သင်တို့ သတိမထားမိကြတဲ့ ကား အတွင်းခန်းထဲမှ အဆိပ်ငွေ့ထွက်ရှိတတ်သည့်အကြောင်း
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 5:50 PM ဗဟုသုတများ
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် နေပူပူထဲမှာ ကားရပ်ခဲ့ ပြီဆိုရင် ကားပေါ်ပြန် ရောက်ရောက်ချင်း ပြတင်းပေါက်တွေ အကုန်ဖွင့်ပြီး ခဏ အကြာမှ လေအေးပေးစက်ကို ဖွင့်သင့်ပါတယ်။
အကြောင်းအရင်းကတော့ ကားထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ပလတ်စတစ် အစိတ်အပိုင်း တွေကနေ အရမ်းပူပြီး Benzene ဘန်ဇင်း ဆိုတဲ့ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ အဆိပ်ငွေတွေ ထွက်လာတာ ကြောင့်ပါ။
ရှုမိရင် ပထမအဆင့်အနေနဲ့ အဆုတ် နဲ့ ကျောက်ကပ်ကို ကောင်းကောင်း ဒုက္ခပေး နိုင်ပါတယ်.. ဒီအဆိပ်ငွေ့ ကို ခန္တာကိုယ်က လွယ်လွယ် နဲ့ မတိုက်ထုတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
ဘန်ဇင်း ကြောင့် ကင်ဆာရောဂါ၊ သွေးဖြူဥ နည်းရောဂါ တွေဖြစ်နိုင်ပြီး ခဏခဏ ရှုမိရင် သွေးကင်ဆာ နဲ့ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတဲ့ အထိဆိုးရွား နိုင်ပါတယ်။ အန္တရာယ်မရှိ နိုင်တဲ့ဘန်ဇင်း ပမာဏက စတုရန်း ၁ ပေကို ၅၀ မီလီဂရမ် ရှိတယ်။
ပုံမှန် နေအေးထဲက ကားတောင် ၄၀၀ ကနေ ၈၀၀ မီလီဂရမ်ထိရှိနေပြီ။နေပူထဲရပ်ခဲ့တဲ့ ကားထဲဆိုရင် ၂၀၀၀ ကနေ ၄၀၀၀ မီလီဂရမ်ထိရောက်နိုင်တယ်လေ။ အဲတော့ လက်ခံနိုင်တာထက် အဆ ၁၀၀ နီးပါးများနေတာပေါ့ . . .
ဒီတော့ နေပူပူ နေအေးအေး ကားထဲဝင်ထိုင် လိုက်တိုင်း မှန်အကုန်ချပြီး လေသန့်သန့် အရင်ပေးဝင် လိုက်တဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ် တဲ့အကျင့်တခု ကိုလေ့ကျင့်ပေး နိုင်အောင် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီ ပိုစ့်လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် …(မှတ်ချက်။ ။ ဘာသာပြန်ပေးထားတာပါ. ကိုယ်တိုင်ခြင့်ချိန်ကြည့်ကြပါ)
သငျတို့ သတိမထားမိကွတဲ့ ကား အတှငျးခနျးထဲမှ အဆိပျငှထှေ့ကျရှိတတျသညျ့အကွောငျး
[Unicode]ဖတျရနျ နပေူပူထဲမှာ ကားရပျခဲ့ ပွီဆိုရငျ ကားပျေါပွနျ ရောကျရောကျခငျြး ပွတငျးပေါကျတှေ အကုနျဖှငျ့ပွီး ခဏ အကွာမှ လအေေးပေးစကျကို ဖှငျ့သငျ့ပါတယျ။
အကွောငျးအရငျးကတော့ ကားထဲမှာ ရှိနတေဲ့ ပလတျစတဈ အစိတျအပိုငျး တှကေနေ အရမျးပူပွီး Benzene ဘနျဇငျး ဆိုတဲ့ ကငျဆာဖွဈစတေဲ့ အဆိပျငှတှေေ ထှကျလာတာ ကွောငျ့ပါ။
ရှုမိရငျ ပထမအဆငျ့အနနေဲ့ အဆုတျ နဲ့ ကြောကျကပျကို ကောငျးကောငျး ဒုက်ခပေး နိုငျပါတယျ.. ဒီအဆိပျငှေ့ ကို ခန်တာကိုယျက လှယျလှယျ နဲ့ မတိုကျထုတျပေးနိုငျပါဘူး။
ဘနျဇငျး ကွောငျ့ ကငျဆာရောဂါ၊ သှေးဖွူဥ နညျးရောဂါ တှဖွေဈနိုငျပွီး ခဏခဏ ရှုမိရငျ သှေးကငျဆာ နဲ့ ကိုယျဝနျပကျြကတြဲ့ အထိဆိုးရှား နိုငျပါတယျ။ အန်တရာယျမရှိ နိုငျတဲ့ဘနျဇငျး ပမာဏက စတုရနျး ၁ ပကေို ၅၀ မီလီဂရမျ ရှိတယျ။
ပုံမှနျ နအေေးထဲက ကားတောငျ ၄၀၀ ကနေ ၈၀၀ မီလီဂရမျထိရှိနပွေီ။နပေူထဲရပျခဲ့တဲ့ ကားထဲဆိုရငျ ၂၀၀၀ ကနေ ၄၀၀၀ မီလီဂရမျထိရောကျနိုငျတယျလေ။ အဲတော့ လကျခံနိုငျတာထကျ အဆ ၁၀၀ နီးပါးမြားနတောပေါ့ . . .
ဒီတော့ နပေူပူ နအေေးအေး ကားထဲဝငျထိုငျ လိုကျတိုငျး မှနျအကုနျခပြွီး လသေနျ့သနျ့ အရငျပေးဝငျ လိုကျတဲ့ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျ တဲ့အကငျြ့တခု ကိုလကေ့ငျြ့ပေး နိုငျအောငျ ရညျရှယျပွီး ဒီ ပိုဈ့လေး တငျပေးလိုကျပါတယျ …(မှတျခကျြ။ ။ ဘာသာပွနျပေးထားတာပါ. ကိုယျတိုငျခွငျ့ခြိနျကွညျ့ကွပါ)
သင်တို့ သတိမထားမိကြတဲ့ ကား အတွင်းခန်းထဲမှ အဆိပ်ငွေ့ထွက်ရှိတတ်သည့်အကြောင်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 5:50 PM Rating:5[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် နေပူပူထဲမှာ ကားရပ်ခဲ့ ပြီဆိုရင် ကားပေါ်ပြန် ရောက်ရောက်ချင်း ပြတင်းပေါက်တွေ အကုန်ဖွင့်ပြီး ခဏ အကြာမှ လေအေးပေးစက်ကို...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 5:50 PM